कोरोना-मुक्त राष्ट्रहरु कुन कुन हुन्? - Himal Dainik
कोरोना-मुक्त राष्ट्रहरु कुन कुन हुन्?
काठमाडौँ ४ मंसिर २०७७, बिहीबार ११:३५
कोरोना भाइरसले बिश्वलाई नै आक्रान्त बनाएको छ। सन् २०१९ को अन्त्यमा चीनको वुहानबाट फैलिएको कोभिड-१९ बाट बिश्वभर ५ करोड ६५ लाख ६३ हजार ८४० जना संक्रमित भइसकेका छन् भने यसबाट कुल १३ लाख ५४ हजार ८०६ को मृत्यु भएको छ ।
यसले अमेरिका, भारत, फ्रान्स, ब्राजिल जस्ता राष्ट्रमा सबैभन्दा बढी प्रभाव पारेको छ । बिश्व नै यसबाट प्रभावित र यसको खोपको पर्खाई बसेका बेला केहि राष्ट्रहरु कोरोना मुक्त भइसकेका छन् ।
जोन हापकिन्स बिश्व बिद्यालयले कोरोना मुक्त देशको सुची सार्बजनिक गरेको छ। १३ नोभेम्बरसम्म बिश्वका ८ राष्ट्रमा कुनै पनि कोरोनाको सक्रिय संक्रमित नरहेको रिपोर्टले बताएको छ। उत्तरी प्रशान्त क्षेत्रमा रहेको पलाउ आइल्याण्डमा यस मध्य एक राष्ट्र हो।
कुल १८ हजार जनसंख्या उक्त राष्ट्रमा अहिलेसम्म कुनै पनि संक्रमण देखिएको छैन। पुलाउ लगभग ३ हजार बर्ष पहिले इंसुलर दक्षिण-पूर्व एशियाको प्रवासीहरु गएर बसेका थिए। सन् २०१९ मा कुल ९० हजार पर्यटन पुलाउ घुम्न गएका थिए। यो पुलाउको जना संख्या भन्दा ५ गुना बढी हो ।
यससंगै समोआ, किरिबाती, टोंगा, माइक्रोनेशिया, नाउरू, तुवालू, पलाउ, तुर्केमिस्तान र उत्तरी कोरियामा पनि संक्रमण नरहेको रिपोर्टले जनाएको छ । तुर्केमिस्तान र उत्तर कोरिया बाहेक अन्य राष्ट्रहरुमा कोरोना मुक्त हुनुमा त्यहाँको कम जनसंख्या र संक्रमण नियन्त्रण गर्न लिएको साबधानी रहेको रिपोर्टले जनाएको छ । संक्रमण बढेसंगै यी राष्ट्रहरुमा यात्रा गर्न प्रतिबन्द लगाइएको थियो। पश्चिम देश उत्तर कोरिया र तुर्केमिस्तानले भने कोरोनाको तथ्यांक लुगाएको आरोप छ। उत्तर कोरियाले सुरुवातमा नै सीमा नाका बन्द गरेको थियो। जसका कारण त्यहाँ संक्रमण न बढेको समेत बताइएको छ।
अघिल्लोसन्दीपले होबर्ट हुरिकेन्सबाट बिग ब्यास लिग खेल्ने
पछिल्लोड्राइभरमा कोरोना देखिएपछि सलमान आइसोलेसनमा
आज २८ जनाको मृत्यु, १९ सय ४८ संक्रमित थपिए